Varwiri veKodzero dzeVanhu Vanorangarira VaItai Dzamara muHarare
Ndira 31, 2018
Murwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika, VaItai Dzamara
Varwiri vekodzero dzevanhu vakaungana muHarare neChipiri vachirangarira VaItai Dzamara, avo vakapambwa makore matatu apfuura nevanofungidzirwa kuti vasori.
Vanhu vanosvika makumi mashanu vakaungana muAfrica Unity Square zuva rodoka neChipiri vachirangarira VaItai Dzamara avo vanonzi vakapambwa nevasori makore matatu apfuura vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vachiri pachigaro.
VaDzamara vanozivikanwa nekuratidzira kakawanda vachiti VaMugabe vabve pachigaro panguva yavakange vachiri kutonga.
Munin'ina waVaDzamara, Doctor Patson Dzamara, vakati ivo semhuri vanoziva kuti mukoma wavo ari mumaoko evari muhurumende.
Mufundisi Evan Mawarire, avo vakanga vari mumwe wevatauri pagungano iri, vakati Mwari havafari kana vanhu vachinyangaditswa sezvakaitwa VaItai Dzamara.
Mutungamiri webato rinopikisa, Muzvare Barbara Nyagomo, avo vakanga vari pakati pechita ichi, vakati hurumende inofanira kuona kuti mwoyo yemhuri yekwaDzamara yanyaradzwa nekutora matanho akasimba kuti VaItai Dzamara vazivikanwe kwavari.
Zvichakadai, Doctor Dzamara vakati vari kudawo kuti hurumende ipindure tsamba dzavakainyorera pamusoro pekushaikwa kwemukoma wavo. Vakaenderera mberi vachiti pachaitwa gungano rakakura kwazvo musi wa9 Kurume rekurangarira mukoma wavo, vachitiwo hurumende inofanira kuita sarudzo dzakachena gore rino, vachiti ndizvo zvimwe zvairwirwa naVaItai Dzamara.
Doctor Dzamara vakatiwo hurumende inofanira kuona kuti mhuri yemukoma wavo yachengetwa naiyo hurumende.
Vamwe vevaishanda naVaItai Dzamara vakati vachaedza kuti vasangane nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nechinangwa chekuti nyaya yekupambwa kwaVaDzamara igadziriswe.